Mayelana nathi - MINETEK
IMinetek yinkampani enezinto ezintsha futhi eziqhutshwa yizixazululo egxile kwezobunjiniyela, ekwakhiweni, ekwenziweni nasekuqalisweni kwemishini ejwayelekile futhi esezingeni eliphakeme esetshenziswa emikhakheni yezimboni nezimayini.
Ukugxila kwethu kukusiza amaklayenti ethu ukuthi afinyelele futhi agcine ukuhambisana nomthetho. Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-30 ekusetshenzisweni kwezimboni imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu nensizakalo yamakhasimende engenakuqhathaniswa. IMinetek inamaqembu aqeqeshiwe, anolwazi futhi anekhono ahlinzeka ngezixazululo ezibanzi.
Ividiyo yeMinetek Corporate, 2020
Umbono wethu ukuthuthukisa isikhundla sethu somhlaba wonke ezimakethe njengomhlinzeki wezixazululo onombono ngokuphonsela inselelo isimo esikhona emkhakheni wezimayini. Ukuhlinzeka ngobudlelwano obubalulekile futhi obuyigugu obukhiqiza imiphumela yokuchazeka yabo bonke ababambiqhaza ngokwenza izinto ezintsha.
Inhloso yethu ukuba nguzakwethu womhlaba wonke wokuzikhethela ngezixazululo eziphakeme neziguquguqukayo ezinselela isimo esikhona, sikwazi amaklayenti ethu ukuzuza imiphumela engenakulinganiswa yezezimali neyokukhiqiza.
Indlela esebenzayo yokuvikela imvelo ingezinye zezinto eziseqhulwini ezisetshenziswayo kuyo yonke imisebenzi yethu yebhizinisi.
IMinetek yinhlangano eyaziwa umhlaba wonke ngenxa yokuthi ixhumanise ngempumelelo futhi yathuma amaphrojekthi amakhulu emisebenzi yezimayini emhlabeni jikelele.
Izinhloso zethu ukusebenzisana namakhasimende ethu ukubuza imibuzo edingekayo, ukuphonsela inselelo izingqungquthela, nokusebenzisa ukucabanga okusha kusuka ezinhlotsheni eziningi zemboni enqamula ukunikeza izixazululo zomsebenzi onenzuzo futhi osebenza kangcono.
Umsebenzi Wokusiza Nokubandakanywa Komphakathi
UMinetek uzibophezele ekunikeni labo abaswele – silwela ukuqinisekisa ukuthi izizukulwane ezizayo ziyachuma. Sinikela ngemali enkulu, izinsizakalo kanye nesikhathi ezinhlanganweni ezingaphezu kwezi-30 zamazwe ngamazwe nezinhlangano ezingenzi nzuzo.
Sihlose ukuqwashisa ngezinkinga zosizo ezimbonini nasemiphakathini jikelele.
Isibopho somhlaba jikelele nezemvelo
Sikholelwa ukuthi imvelo kungumthwalo wawo wonke umuntu. Ukuvikelwa nokulawulwa kokungcola okuhlanganisiwe kanye nendlela esebenzayo yokuvikela imvelo yizinto eziseqhulwini kuyo yonke imisebenzi yethu yebhizinisi.
Indawo ehlanzekile engenakho ukungcola iyisihluthulelo sekusasa lethu futhi nokuvikelwa kwayo kufanele kube yinto ebekwa eqhulwini yiwo wonke umuntu.
Indlela ehlelekile nephelele
Sikholelwa ukuthi indlela ephelele iyindlela ephumelela kunazo zonke yokuqonda ubunzima bezinselelo zesiza sezimayini futhi sikhiqize imiphumela evumelekile nephelele esiza amaklayenti ethu.
Izindlela nezinqubo eziphelele zidinga ukuthi sidlulele ngale kwezindlela ezijwayelekile ukuze siqonde amandla wokwenza izinto ezintsha kanye nenqubekela phambili.